ထက်ထက်နဲ့မအေးးသူဆံတို၏ဇာတ်ကားးအဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ထက်ထက်နဲ့မအေးးသူဆံတို၏ဇာတ်ကားးအဆက်
Posted by nyanay on Jun 3, 2010 in Other - Non Channelized |5comments
ထက်ထက်မိုးဦး က မအေးသူစံအား တောင်းပန်မှု မပြုနိုင် စစ်အစိုးရ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်း ချီတက်မည် ဟုဆို
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးနှင့် 7day ဂျာနယ် သတင်းထောက် မအေးသူ စံ တို့ ၏ အမှု အား မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံး မှ ၀င်ရောက် ဖြန်ဖြေပေး ရန် စီစဉ် သော် လည်း ထက်ထက်မိုးဦး က ငြင်းဆန်လိုက်ပြီး ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး အဆိုပြုထားသည့် လူသိရှင် ကြား တောင်းပန် မှု လမ်းကြောင်း ကို သူမ မလုပ် နိုင်ဟုဆိုသည်။
ရန်ကုန် အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်း သမား တစ်ဦးက ၂၆ ရက်နေ့ က ထက်ထက် မိုးဦး နဲ့ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံး ကတာဝန် ရှိ သူတွေ တွေ့ ကြတယ်။သူတို့ က ပြောတယ် စာနယ်ဇင်း ဘက် ကနေ အေးသူစံ နဲ့ တွေ့့တယ်ပေါ့။ထက်ထက် က လူသိရှင် ကြား တောင်းပန်ပေးမယ် ဆိုရင် ကျေနပ် မယ် ပေါ့ လို ပြောတော့။
သူကအန်ကယ်တို့လာတာ ဒီကိစ္စ အတွက် လား၊ဒါဆို ကျွန်မ က ဆောရီးပါ သူ ကျွန်မ ကို တရား စွဲ ထားတယ်လေတရား ဥပဒေ အတိုင်း သွားကြတာ ပေါ့ တရာ ကိုယ် နတ် စောင့် ပါတယ်၊ထက်ထက် ဘက်မှာအမှန်တရား ရှိ တယ် ၊လို့ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည် ဟု ပြောသည်။
ထက်ထက် မိုးဦး အား မြန်မာ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံးမှ သွားရောက် တွေ့ ဆုံ သည့် နေ့ သည် မေလ ၂၄ စတင်ကြားနားမှု အပြီး မေ လ ၂၇ ရက်နေ့လိုပြ သက်သေ များ အား ကြား နာမှု မစတင် မှီတွင် ဖြစ်သည်။
ရန်ကင်း တရားရုံး က ထက်ထက်မိုးဦး နှင့် သတင်း ထောက် အမှု အား ဇွန် လ ၃ ရက်နေ့ သို့ ရုံးချိန်းပေးထားသည်။ထိုနေ့ တွင် ရန်ကင်း တရား ရုံးသို့သူမ၏ ပရိသတ် မြောက်များ စွာ လာနိုင်သည်ဟု ထက်ထက်မိုးဦး နှင့် နီးစပ် သူ များ ကဆို သည်။ထက်ထက် မိုးဦး က မြန်မာ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး၏
ကြားဝင်ဖြန်ဖြေချက်ကို ငြင်းဆန်လိုက်သည်ကို စိတ်ပျက်မိကြောင်း အပတ်စဉ်သတင်းဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ တစ်ဦး က Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
သူက ကြားက အေးရာ အေး ကြောင်း လုပ် ပေး တာ ကို ငြင်း တယ် ဆိုတော့ သူ့ မှာ ဘယ်အားကိုး ရှိ နေ လို့ လဲ မသိ ဘူး ဟု ပြောသည်။ရန်ကုန် မြို့ မှ ဓာတ်ဆီဆိုင် ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က မူ ဒီအမှု မှာထက်ထက်မိုးဦး မှား တယ် ဆိုတာ သိတယ် ဒါပေမယ့် ဂျာနယ် တွေ က လည်းသူတို့ ကိုယ် သူ တို့ငါဘာကောင် လဲ သိလား ဘာညာ နဲ့ဖြဲ ခြောက် ထား တွေ ရှိ တော့ ထက်ထက် ဘက် က ပဲ လိုက်မယ်ဟု ပြောသည်။
ရပ်ကွက် ထဲ တွင် ပြောကြား နေ သော ဟာ သစကား များ အရ ထက်ထက်မိုးဦး အမှု ကို ကိုင် သည့် တရားသူကြီးသည် စီရင်ထုံး နှင့် အမှု သွား အမှု လာ ကို ကြည့် ပြီး ဆုံး ဖြတ်ရမည့်အစား ဘလောက်၊ ၀ဘ်ဆိုတ် ၊ဖေ့ ဘွတ် စသည် တို့ ပေါ်တွင်ရေးထားသည့်ကော်မန့် နှင့် ထင်မြင် ချက် များ ကို မှု တည် ၍ စီရင် ဆုံးဖြတ်မည် ဟု ဆိုသည်။
ထက်ထက် မိုးဦး နှင့် သတင်းထောက် အမှု အား မြန်မာ လူငယ် တို့ အသုံးများ သည့် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် ရေးသားဝေဖန် မှု များ ပြုလုပ်ကြ ရာ နိုင်ငံတကာ ရောက် မြန်မာ များ နှင့် လူကြီး လူငယ် မရွေး ပါဝင် ဆင်နွှဲ ကြသည်။ သတင်းထောက်များ ၏ မေးခွန်း များ ကို ဟန့် တား လို သော အားဖြင့် ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်မှ ရပ်လိမ့် မည် ဟုအကယ်ဒမီ ဆုရှင် တို့ ခန့် မှန်း ကြသည်။
၀န်ခံချက်။ ။ post by လူလေး၂၀၁၀
Jun 02 xmyanmarx
ဘာလဲ? ထက်ထက်မိုးဦးက အစိုးရပိုင်းကို ပိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာလား? သူက ဘာမို့လို့လဲ? ဒီကြားထဲ ၀န်ကြီးဦးကျော်ဆန်းကလည်း ကာဆီးကာဆီးနဲ့။ ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ မလိုက်ပဲပြောရရင် မေးတဲ့သတင်းထောက်ကတော့ နည်းနည်းလွန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထက်ထက်မိုးဦးက ပြန်မဖြေလည်းရတယ်။ လက်မပါလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါကိုဘာလို့ မစောင့်ထိန်းရတာလဲ။ ပြီးတော့ ဆီဆိုင်ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့လူကလည်း အမှားအမှန်မခွဲနိုင်ဘူးလား။
တော်ကြပါတော့ တော်ကြပါတော့ တေချင်းချိုးတွေရဲ့ 
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ လျှို့ ဝှက်အကြောင်းလူသိရှင်ကြားမေးလာရင်ရော ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ။
ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်လိုက်လို့ မထက်ကို မှားတယ်လို့ ပြောကြရင် မေးတဲ့ သူကလည်း မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်မေးတဲ့ မေးခွန်း မေးသင့်လား မမေးသင့်ဘူးလား ဆိုတာကို အစကတည်းက ဘာလို့မစဉ်းစားလဲ?????????
စာနယ်ဇင်းသမားတွေကလဲ ဘာမေးမေး ရတယ်ဆိုပီ မဆင်ခြေကြဘူး ခက်တာပဲ
ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားကြပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်